Hello Nepal News » आज पोर्चुगल र स्पेनको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
आज पोर्चुगल र स्पेनको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
वर्ष २०१९ को युइएफए नेसन्स लिग च्याम्पियन पोर्चुगल र युरोपियन महारथि स्पेनबीच आज रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ । युरोपियन फुटबलका दुई ‘पावरहाउस’ टोलीहरू आज मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एकअर्काविरुद्ध आमनेसामने हुन लागेका हुन् । खेल पोर्चुगलको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार ठीक राति १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
युरोपका दुई हेभिवेट टोली भिड्ने भएकाले आजको खेल धेरैका लागि प्रतीक्षाको खेल बनेको छ । यी दुई टोली पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा रसियामा भएको फिफा विश्वकपको समूह चरणमा भिडेका थिए । बहुचर्चित सो खेल ३–३ को बराबरीमा सकिएको थियो । सो खेलमा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक गरेका थिए ।
करिब २ वर्षपछि यी दुई टोली आज पोर्चुगलमा भिड्दा यो खेल प्रतिष्ठाको खेल हुनेछ । मैत्रीपूर्ण भए पनि युरोपियन फुटबलका पावरहाउस टोली एकअर्काविरुद्ध भिड्ने भएकाले यो खेल दुवै टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस खेललाई युइएफए नेसन्स लिगमा दोस्रो चरणको खेलका लागि तयारी खेलका रूपमा लिइएको छ ।
आज पोर्चुगिज टोलीमा कप्तान रोनाल्डोसहित अधिकांश प्रमुख खेलाडी छन् । यस चरणमा पोर्चुगलले तीनवटै ठूला खेल्ने भएकाले प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले प्रमुख खेलाडीलाई टोलीमा समावेश गरेका छन् । यता, स्पेनिस टोलीको कप्तानी सर्जियो रामोसले नै गर्नेछन् । स्पेनको टोलीमा यसपटक धेरैजसो युवा खेलाडीलाई स्थान दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति २१ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:१५